Funda isitatimende sikaRamaphosa ngomhlangano wakhe noZuma | News24
Funda isitatimende sikaRamaphosa ngomhlangano wakhe noZuma
Johannesburg - ISekela likaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa uthi yena noMengameli Jacob Zuma baqale izingxoxo ngoLwesibili ebusuku mayelana nesikhundla sakhe njengomengameli wezwe.
Nasi isitatimende sikaRamaphosa:
Sekube nokuhlawumbisela okuningi kanye nokukhathazeka mayelana nesikhundla sikaMengameli Jacob Zuma njengenhloko yezwe kanye nohulumeni wezwe.
Ngithanda ukucacisa ezinye izinto mayelana nalolu daba.
NgoLwesibili ebusuku, uMengameli Jacob Zuma nami siqale izingxoxo ubuso nobuso mayelana noguquko kanye nodaba oluphathelene nesikhundla sakhe njengomengameli wezwe.
Lezi zingxoxo zibe yimpumelelo kanti ziyisisekelo sesixazululo esisheshayo ngalolu daba oseludonse amehlo abantu abaningi.
Mayelana nenqubekelaphambili, kuvunyelwene ngokuthi kuhlehliswe umhlangano we-ANC National Executive Committee obuhlelelwe uLwesithathu. Lokhu kuzovumela uMengameli Zuma kanye nami ukuthi sikwazi ukuphothula izingxoxo bese sethula umbiko ezweni kulezi zinsuku ezimbalwa ezizayo.
Ngiyazi ukuthi ukungacaci kahle ngesikhundla sikaZuma kudala ukukhathazeka ezweni. Siyakuqonda lokho. Nokho, nginethemba lokuthi lo mgudu esiwuthathile uzophuma nesiphetho esingeke sibheke lokhu kukhathazeka kuphela, kepha siphinde sihlanganise abantu baseNingizimu Afrika nokungumsebenzi ekumele siwenze ekwakheni leli lizwe.
Sizokwazi ukuxhumana nani ngokuhamba kwesikhathi mayelana nodaba lukaMengameli Zuma uma sesiziphothulile izingxoxo.
Yize isimo njengamanje siphoqe ukuba kuhlehliswe inkulumo ebhekiswe esizweni, umsebenzi kahulumeni nowePhalamende uyaqhubeka.
Lesi yisikhathi esinzima ezweni, kimina nakumengameli kanti futhi siyazi ukuthi abantu badinga "ukubekwa esithombeni" ngokuqhubekayo.
Kulezi zingxoxo ngiqhutshwa wumgomo wokwazi ukuthi izidingo zabantu bezwe yizo eziseqhulwini.